जसले कन्यादान दिए उसैसँग विपना थापाको सम्बन्ध विग्रियो ! विपिनाले खोलिन श्रीमान अपहरण भएको राज (भिडियो) – An Online Entertainment News Portal
HomeEntertainmentजसले कन्यादान दिए उसैसँग विपना थापाको सम्बन्ध विग्रियो ! विपिनाले खोलिन श्रीमान अपहरण भएको राज (भिडियो)
जसले कन्यादान दिए उसैसँग विपना थापाको सम्बन्ध विग्रियो ! विपिनाले खोलिन श्रीमान अपहरण भएको राज (भिडियो)
June 6, 2018 sutraentertainment Entertainment, Event, Kollywood, News, Videos 0
दश बर्ष अघि भारत यूपि स्थित मथुरा जिल्लाका एक धनाढ्य व्यवसायी एवं नेता आशुतोष भारद्धाजसँग विवाह बन्धनमा बाँधिएपछि फिल्म नगरीबाट टाढा हुन पुगेकी हिरोइन विपना थापा यति खेर नेपाल आएकी छिन् ।बेला बेलामा नेपाल आईराख्ने विपनासँग हामीले यो पटकको भेटमा विशेष अन्तरवार्ता पनि लिएका छौ । सानैमा पिता गुमाएकी विपनाको विवाह मधुरामै भएको थियो जुन विवाहमा कन्यादान दिने पिता बनेर कलाकार किरण केसी पुगेका थिए । तर विडम्बना कन्यादान दिने पितासँग विपनाको पछिल्लो समय राम्रो सम्बन्ध छैन ।
फिल्म नगरीमा सक्रिय रहदा किरण केसीको घरमै बस्ने विपनाको धर्म पितासँग किन सम्बन्ध विग्रियो भन्ने गहकिलो प्रश्न सहित उनका अन्य गोप्य प्रसँगहरुलाई पनि कोट्याउँने प्रयाश गरेका छौ हामीले ।
केही घोचिलो, केही जोशिलो अनि केही रमाईलो प्रश्नहरुका साथ विपना थापासँग गरिएको कुराकानीमा उनले आफ्नो प्रेम सम्बन्धले कसरी विवाहको रुप लियो भन्ने बिषयमा पनि रोचक कथा खुलाएकी छिन् । जहाँ उनले भनेकी छिन् श्रीमानको अपहरणनै भयो अनि के भयो के भयो‘।
२९ दिनमै रेखाको ‘मलिका’ प्याकअप
‘डिठ्ठा साब’ले लाए ‘बुनु मैचा’ लाई शब्दसँग खेल्न नसकेको आरोप, आखिर किन ? (भिडियो)